नेपालको झण्डा लिएर भारतीय नै उत्रिए वर्ल्डकप छनोटमा, नेपाललाई अत्तो न पत्तो!
25th March 2021, 01:24 pm | १२ चैत्र २०७७
Photo : etvbharat.com
काठमाडौं : कुनै पनि उच्चस्तरको खेलमा कुनै एउटा देशको खेलाडीले अर्को देशको झण्डा प्रयोग गर्दै प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको सुन्नु भएको छ? अघिल्लो साता भारतको नोयडामा सम्पन्न 'टेन्ट पेगिङ वर्ल्डकप क्वालिफायर्स'मा यस्तै भएको छ। भारतको ग्रेटर नोइडामा सम्पन्न घोडचढी प्रतियोगितमा चारजना भारतीय खेलाडीहरुले नेपालको झण्डा प्रयोग गर्दै खेलेर तेस्रो स्थान समेत हासिल गरे।
उक्त प्रतियोगिता इक्वेस्ट्रियन फेडेरेसनको आयोजनामा मार्च १६ देखि १८ सम्म आयोजना भएको थियो। जुन इन्टरनेसनल टेन्ट पेगिङ फेडेरेसन् (आईटीपीएफ) को को मातहतको हो, जसको मुख्यालय ओमनको मस्कटमा रहेको छ।
प्रतियोगितामा नेपालको भनिएको टिमले १२१ पोइन्ट हासिल गरेको थियो। त्यसैका आधारमा नेपालको खातामा कास्य पदक पनि मिल्यो। दोस्रो भएको पाकिस्तानको नेपालको भन्दा ३ पोइन्टमात्र बढी रह्यो।
प्रतियोगितामा पाँच टिमको सहभागिता रहेको थियो। जसमा अमेरिका, ओमन, बेलारुस, भारत, पाकिस्तान र नेपाल थिए। त्यहाँ सम्पन्न ७ फरक प्रतियोगितामा भारतले ६ स्वर्ण र एक कास्यसहित ५१५ अंक जोडेर पहिलो हुँदै प्रतियोगितामा प्रथम भयो। र, विश्वकपका लागि क्वालिफाइ भयो। विश्वकप प्रतियोगिता भने सन् २०२३ मा दक्षिण अफ्रिकामा हुनेछ।
आईटीपीएफको नियम अनुसार वैध विश्वकप क्वालिफायर्सका लागि ४ या सो भन्दा बढि टोलीबिच प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ।
तर, प्रतियोगिता सकिएपछि एउटा यस्तो रहस्य खुल्यो जसले अहिले चर्चा पाइरहेको छ - भारत र नेपालको टिमबाट खेलिरहेका सबै खेलाडी भारतीय नै थिए। अर्थात्, नेपालबाट खेलिरहेका खेलाडी पनि भारतीय नै निस्किए। नेपालबाट खेलिएका भनेका खेलाडीको नाम फरक गरेर लेखिएको थियो भने थर उल्लेख थिएन। प्रतियोगितामा पाकिस्तानको टिम दोस्रो भएको थियो भने नेपाल भनिएको टिम तेस्रो भएको थियो।
नेपाली टोली भनिएको टिममा रहेका चार जना राइडर्सहरुमा योगेन्दर, गोलम, केपिल र विनय रहेका छन्। उनीहरुको वास्तविक नाम भने योगेन्दर, गुलाम मोहम्मद, कपिल र विनय कुमार रहेको भन्ने खुलेको छ। ती सबै खेलाडी भारतीय नागरिक हुन्।
इफएलले यसबारेमा आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको र झण्डाको मुद्दामा आईटीपीएफलाई पत्र लेखिसकेको बताइएको छ। त्यस्तै, इक्वेस्ट्रियन फेडेरेसन अफ नेपाललाई पनि पत्र लेखेर यसको स्‍पस्टिकरण पठाएको बताइएको छ।
इएफआईका महासचिव जइविर सिंहले नेपालको संघबाट खेलाडी आएकाले पृष्टभूमि परीक्षण नगरी प्रतियोगितामा समावेश गराइएको बताएका छन्। अर्थात उनको सिधा आरोप नेपाली संघमाथि छ।
'नेपालको संघले हामीलाई नाम पठाएको हो। त्यसैले आईटीपीएले यो स्वीकृत गरेको हो। त्यसैले हामीलाई लाग्यो यी खेलाडीहरु 'जेन्युन्' हुन्,' उनले भनेका छन्, 'कुनै देशको फेडेरेसनले भन्छ कि यी हाम्रा खेलाडी हुन् र यिनीहरुले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौं। अझ नेपालसँग त भिसाको पनि आवश्यकता पर्दैन। त्यसैले हाम्रो ध्यान पाकिस्तान र अमेरिकामा रह्यो।'
त्यस्तै, नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका खेलाडी योगेन्दरले सुप्रिय भन्ने ब्यक्तिले आफूलाई नेपालबाट खेल्न आग्रह गरेको बताए।
उनले टाइम्सअफ इण्डियासँगको कुराकानीमा भनेका छन्, 'एकजना सुप्रिय भन्ने व्यक्ति म सँग नजिकिए र प्रतियोगितामा नेपालबाट सहभागिता जनाउन आग्रह गरे। ती ब्यक्तिले आफूले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका थिए। त्यसैले म ग्रेटर नोइडा गएर प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएँ।'
यद्यपि, इएफआई भित्रकै अर्को स्रोतले भने प्रतियोगितामा चार टोलीको सहभागिता जनाउन अनिवार्य भएको र पाकिस्तान र अमेरिकाको भिसा कठिनाइ भइरहँदा भारतीय राइडर्स नै नेपालको नाम लिएर प्रतियोगितामा सहभागी भएको दाबी गरेको छ।
राखेप र ओलम्पिक कमिटी बेखबर
नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले घोडचढीको संघ आफ्नो कमिटी मातहतमा नभएको बताए।
'यो ओलम्पिकको छातामुनिको इभेन्ट होइन। यसो भएको हो भने हामीले भन्दा पनि खेलकुद परिषदले कारवाही अघि बढाउनु पर्छ,' महासचिव श्रेष्ठले भने, 'विदेशी नागरिकलाई नेपालको झण्डामा सहभागी गराउन पाइँदैन।'
श्रेष्ठले भारतमा चाहिँ आर्मी पुलिसमा भएका नेपाली खेलाडीले नेपाली नागरिकता नै राखेर भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने चलन रहेको सुनाए।
'ओलम्पिकको छातामुनिको गेम भएको भए हामीले कारवाही गर्ने कुरा आउँथ्यो। हामीले अघि कारवाही बढाउने भनेको संघलाई निलम्बित गर्ने या सदस्यताबाट हटाउने हुन सक्थ्यो,' उनले भने, 'तर यो हाम्रो मातहतको विषय रहेन।'
त्यस्तै, राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला घटनाबारे बेखबर रहेको बताए।
'यस्तो हुनु हुँदैन। भएको भए कारवाही हुनुपर्छ,' उनले भने।
यसबारे बुझ्न खोज्दा नेपाल इक्वेस्ट्रियन फेडेरेसनका अध्यक्ष रवि राजकर्णिकारले आफ्नो जानकारी विना नै प्रतियोगिता भएको र नेपालसँग प्रतियोगिताको कुनै साइनो नरहेको बताए।*
'मैले पनि यसबारे हिजोमात्र जानकारी पाएको हुँ। हामी प्रतिस्पर्धामा सहभागी छैनौं। जसरी प्रतियोगिता भएको छ, त्यो गलत हो,' उनले भने।
सम्बन्धित समाचार : नेपाली झण्डामा भारतीय खेलाडीको प्रतिस्पर्धा : नेपाली पक्ष भन्छ, 'हामीलाई जानकारी छैन, भारतले गैरकानुनी काम गर्‍यो'
*(यसअघि उनी सम्पर्कमा नआए पनि समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिक्रिया दिएका हुन्। - सम्पादक )